Socdaal Xalaal ah oo loo aado Tuzla - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Tuzla waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Bosnia iyo Herzegovina, oo ka mid ah gobollada ugu muhiimsan ee warshadaha Bosnia. Magaalada si dhib yar si toos ah ugama beegsan dagaalka, marka laga reebo dhacdo ku dhow dhamaadka dagaalka, markii 72 qof lagu dilay madfac lagu tuuray Magaalada Qadiimiga ah fiidkii. Maalmahan, dhaqaalaha magaalada wali wuxuu ku tiirsan yahay inta badan warshadaha, in kasta oo horumar baaxad leh laga sameeyey dalxiiska qarniga 21-aad.
Ku safridda Tuzla way fududahay xagga koonfureed, waana ka yar tahay Republika Srpska ama Serbia. Ha aaminin jadwalka basaska ee sabuuradda madow ee istaanka baska weyn, maadaama waqtiyadan ay ahaayeen kuwo guud ahaan khaldanaa!
Istaanka basaska ee Tuzla (Autobuska stanica Tuzla), Bosne Srebrene 60. Waxaa ku yaal dukaan, xafiiska tigidhada iyo musqusha gudaha saldhigga. Had iyo jeer weydii jadwalka tikidhada / macluumaadka jadwalka hadda jira. Jadwalka ku yaal gudaha xarunta basaska ma daboolayo dhammaan iskuxirka mar walbana ma cusbooneysiin. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Waxaa jira basas badan (Isniinta ugu horeysa ilaa Jimcaha markay tahay 09:30, Sa Su 10: 00, ugu dambeyn 18:50 - 1-2 saacadiiba) laga bilaabo Sarajevo ilaa Tuzla. Sidoo kale waxaa jira basas (marka hore 04:00, ugu dambeeya 18: 00- 1-2 saacaddii) laga bilaabo Tuzla ilaa Sarajevo. Tigidhka hal-dhinac ah wuxuu ku kacaa 13-20 BAM (waxay kuxirantahay shirkadda basaska) safarku wuxuu qaadanayaa 3 saacadood.
Waxaa jira seddex bas (04:45, 06:30, 16:00) laga bilaabo Mostar ilaa Tuzla. Sidoo kale waxaa jira basas (08:00, 09:30) laga bilaabo Tuzla ilaa Mostar. Qiimaha tikidhada hal-dhinac ah qiyaastii. 36 BAM iyo safarku wuxuu qaataa 5½ saacadood.
Laga soo bilaabo Osijek
Waxaa jira laba bas (06:30 iyo 13:30) laga bilaabo Osijek ilaa Tuzla. Sidoo kale waxaa jira basas (06:00 iyo 13:00) laga bilaabo Tuzla ilaa Osijek. Safarku wuxuu qaadanayaa 3½ saacadood. Jadwalka ayaa laga heli karaa halkan.
Ka Kala Bax
Waxaa jira hal bas (07:00) laga bilaabo Split ilaa Tuzla. Sidoo kale waxaa jira basas (05:30 iyo 08:00) laga bilaabo Tuzla ilaa Split. Jadwalka ayaa laga heli karaa halkan. Safarku wuxuu qaadanayaa 9 saacadood.
Si aad uga safarto Banja Luka, uga beddel Doboj. Waxaa jira labo adeeg oo maalinle ah oo loo maro Bjeljina, halkaas oo ay xiriirro ku leeyihiin meelaha kale ee RS sida Višegrad, iyo sidoo kale Serbia iyo Montenegro. Waxaa jira basas toos ah oo ka yimaada Belgrade. Safarku wuxuu qaadanayaa afar saacadood, oo soconaya saddex jeer maalintii.
Laga soo bilaabo ama ilaa Sarajevo, Croatia, Slovenia ama Jarmalka waxaad isticmaali kartaa shirkadda Salinea-bus - basaska oo dhan kuma qorna boggaas.
Tareennada taga Tuzla waa kuwo gaabis ah oo aan badnayn, waxyeello baaxad leh oo soo gaadhay kaabayaasha tareenka intii lagu jiray iskahorimaadkii ka dhacay Bosnia iyo Hercegovina ee 1990-meeyadii ayaa inta badan eedda leh laakiin sidoo kale caqabado dhaqaale Si kastaba ha noqotee, hawlwadeenka qaranka ZFBH wali waxay maamushaa in tareenada laga raaco Doboj, halkaas oo ay isku xirmaan Sarajevo.
Xarunta tareenka ee Tuzla (Zeleznicka Stanica Tuzla), Bosne Srebrene. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ee Tuzla (Međunarodni aerodrom Tuzla), Dubrave Gornje 75273. Tu Th Sa 03: 30-23: 00, MW Su 04: 00-22: 30. Gegidan diyaaradu waxay 11 km ka baxsan tahay bartamaha magaalada. Waxaa jira shirkado yar oo kiro ah (waxay ka furan yihiin 06:00), xafiiska sarrifka (wuxuu ka furan yahay 06:00) iyo maqaayad ku taal hoolka weyn ee garoonka diyaaradaha. Intaa waxaa sii dheer waxaa ku yaal bar yar iyo dukaan bilaa cashuur ah (oo ka furan 06:00) aagga ay ka baxaan. Wizzair wuxuu uga duulaa halkan Basel / Mulhouse (Switzerland / France), Dortmund (Jarmalka), Eindhoven (Nederland), Gothenburg (Sweden), Frankfurt-Hahn (Jarmalka), Malmö (Sweden), Memmingen (Jarmalka), Nürnberg (Jarmalka) ), Sandefjord-Torp (Norway), Stockholm-Skavsta (Sweden). Waxaa jira 21 bixitaan iyo 21s imaanshaha toddobaad kasta. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Sida ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu tago bartamaha magaalada waa tagsi. Tagaasida laga bilaabo garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada Tuzla waxay ku kacayaan 30 BAM. Jihada ka soo horjeedka taksiyada waxay ku kacaysaa 15-20 BAM.
Waxaa jira bas dadweyne. 11 oo shaqeeya ku dhowaad saacad kasta inta udhaxeysa Dubrave iyo Tuzla. Jadwalka waxaa laga heli karaa halkan (bogga 31). Haddii aad ka safreyso garoonka diyaaradaha waad qaadi kartaa baskaan Dubrave Aerodrom joogsiga baska (waa inaad ku socotaa 800 mitir wadada weyn ka dibna u leexo midig 200 mitir kale). Basku halkaan ayuu joogi doonaa. 31 daqiiqo ka dib markii laga amba baxay Kalesija - Povratak safka jadwalka. Haddii aad u safreyso garoonka diyaaradaha xulashada ugu fiican waa inaad baskaan ku qabato boosteejada horteeda Medugradska Autobusna Stanica joogsiga baska (basku wuxuu halkan joogi doonaa qiyaastii. 22 daqiiqo kadib markii laga ambo baxay Tuzla AS "Istok" - Polazak tiirka jadwalka) ama ku dhow bartamaha magaalada on Higijena joogsiga baska (basku wuxuu halkan joogi doonaa qiyaastii. 17 daqiiqo kadib markii laga ambo baxay Tuzla AS "Istok" - Polazak safka jadwalka). Tigidhada laga helo darawalku waa 2 BAM. Safarka u dhexeeya Tuzla iyo garoonka diyaaradaha wuxuu qaadanayaa qiyaastii. 30 daqiiqo.
Qabriyada 72 dhalinyaro ah ayaa lagu diley xasuuqii Tuzla, 1995.
Bosnia waxay leedahay baadiyaal qurux badan. Meesha ugu fiican ee lagu safro waa gurigii cusmaan. Waa wax cajiib ah.
Meesha ugu horeysa ee booqashada waa fagaaraha bartamaha magaalada qadiimiga ah. Halkani waa goobtii lagu xasuuqay Tuzla, halkaas oo lagu dilay 72 dhalinyaro ah 1995. Weydiiso dadka deegaanka inay u turjumaan gabayga lagu xardhay taalada. Kadib u gudub beerta ay ku aasan yihiin 72-ka dhalinyarada ah. Magaalada qadiimiga ah aad bay ufiicantahay beerta nasashada waa mid aad uqurux badan.
Sidoo kale waa inaad booqataa harooyinka Pannonica Lakes, oo biyahooda si toos ah looga helo ceelasha biyaha cusbada. Milixda Tuzla waxaa laga faa'iideysanayay qarniyo badan waana inaad booqataa barxadda Cusbada ee loogu talagalay qaybtan taariikhda Tuzla.
Haddii aad xiisaynayso farshaxanka, booqo qaar ka mid ah qolalka farshaxanka ee quruxda badan ee Tuzla. Haddii aad xiisaynayso taariikhda, waa inaad aragto tusaalaha tuulada qadiimiga ah ee u dhow Pannonica.
Matxafka Bariga Bosnia (Muzej Istočne Bosne), Džindić mahala 21. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Harooyinka Pannonica, Kulina bana. Meel fiican oo lagu dabaasho iyo nasasho Isugeyn saddex haro, xeebo, baarar iyo goobo loogu talagalay carruurta. 3.5 BAM (maalmaha shaqada), 4 BAM (dhamaadka usbuuca). (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Farsamada gacanta ee gudaha laga soo saaro sida dambiilo ama alaabta guriga.
Dhammaan cuntooyinka Bosnia ee caadiga ah ayaa laga heli karaa magaalada oo dhan, laakiin cunnooyinka caalamiga ah kuma laha joogitaan sare. Waxa kale oo jira makhaayado badan oo dhaqameed Bosnian ah oo aad ka cuni karto cevapi loo diyaariyey si ka duwan tii Sarajevo.
Biblioteka 45, Kristijana Krekovića 7. Ku adeegida cunnada caadiga ah barxad wanaagsan. . 10. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Old Town waxay leedahay makhaayado badan iyo baarar.
Halkee laga joogaa Tuzla
Hoteelka Tuzla, ZAVNOBiH-a 13. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Hotel Dom penzionera, Filipa Kljajića 22. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Motel Rudar, Mitra Trifunovića Uče 9. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Fadhiga Nargalic, Turalibegova 40. (cusbooneysiiyay Oktoobar 2015)
Qolalka Xarunta, Trg Stara Tržnica 8. 60 BAM incl TV / AC / Quraac. (cusbooneysiiyay Nofeembar 2015)
Xusuusnow Tuzli, Donji Mosnik, ☎ +387 61 704 997.30 BAM incl TV, AC, Ka wareejinta garoonka diyaaradaha.
Basasku waxay si joogto ah ugu socdaan Lukavac, qiyaastii 20 daqiiqo. Halkaan, taksi toban daqiiqo ah ayaa kaa qaadaya Lake Modrac, oo ah haro weyn oo leh maqaayado yar. Wasakhda warshadaha awgood, si kastaba ha noqotee, ammaan ma aha in lagu dabaasho harada.
Meel aad u rajo badan ayaa ah harada Bistarac. Bas u raac Lukavac, oo ka deg magaalada wax yar ka hor. Buurta dusheeda waxaa ku yaal haro biyo nadiif ah oo nadiif ah. Waxaa jira lacag yar oo soo gelitaan ah, oo leh lacag yar oo dheeri ah oo loogu talagalay isticmaalka boodhku ilaa harada. Xeryaha iyo maqaayada ayaa laga cuntaa.
Kladanj, oo qiyaastii 90 daqiiqo bas ujirta dhanka Sarajevo, waa magaalo yar, soojiidasho leh makhaayado yaryar oo badan, iyo goob dalxiis oo yar oo u dhow.
Doboj waxay dayactirtay qalcaddii qarniyadii dhexe, qiyaastii 1½ saac tareen.
eHalal Safarka Mart > Boosniya iyo Herzegovina Xalaal Safar > Xalaal Safarka Tuzla
Tilmaamaha Safarka Suurat Thani Xalaal